နိုဝငျဘာ, 1907 ။
ခရစ်ယာန်က Man တစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်, Soul နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ Theosophist က Man ခုနစ်အခြေခံမူရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ စကားအနည်းငယ်တွင်ဤခုနစ်အခြေခံမူဘာတွေလုပ်နေလဲ?
အဆိုပါ theosophist နှစ်ခုရှုထောင့်ကနေလူကိုကြည့်ရှုသည်။ တ ဦး မှအသေခံ။ ၊ လူ၏သေတတ်သောအပိုင်းသည်ကွဲပြားသောနိယာမလေးမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပထမ၊ စိုင်အခဲများ၊ အရည်များ၊ လေနှင့်မီးများမှတည်ဆောက်ထားသည့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်လုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယ၊ ရုပ်ပိုင်း၏ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သောလင်ဂါရှရီရာ။ ဤပုံစံခန္ဓာကိုယ်သည်အီသာဖြစ်သည်၊ ပုံမှန်ပြောင်းလဲနေသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်ပြောင်းလဲမှုနည်းသည်။ ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်သည်မဖွဲ့စည်းထားသောအစားအစာများကိုခန်ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ယူဆောင်သွားသောအစိုင်အခဲများ၊ အရည်များ၊ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်အလင်းများကိုပုံသွင်းပေးသည်။ တတိယအချက် - ပရနန်သို့မဟုတ်ဘဝ၏နိယာမဖြစ်သည်။ ဒီဘ ၀ ၏နိယာမတရားဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံစံကိုတိုးချဲ့ပြီးကြီးထွားစေတယ်။ ဘဝ၏နိယာမအားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အစားအစာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသည်။ ဘ ၀ ၏နိယာမကိုဖြိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးအဟောင်းကိုချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းကိုပုံစံအသစ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဟောင်းကိုသယ်ဆောင်သွားပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်ဖြင့်အစားထိုးသည်။ သက်ရှိအရာများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံသဏ္givenာန် ပေး၍ ပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်အတူတကွထိန်းသိမ်းထားသည်။ စတုတ္ထအချက်မှာကာမာ၊ အလိုဆန္ဒ၏နိယာမဖြစ်သည်။ အလိုဆန္ဒသည်လူတို့၏တုန်လှုပ်နေသောတပ်မက်သည့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသားအတွင်းရှိပင်ကိုယ်ပင်ကိုဗီဇများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏သဘောထားများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏ဘဝနှင့်ပုံစံကို အသုံးပြု၍ လမ်းညွှန်ပေးသည်။ ဤနိယာမတရားလေးပါးသည်လူတို့၏သေခြင်း၊ ကွဲကွာခြင်း၊ ပြိုကွဲခြင်းနှင့်၎င်းမှဆွဲယူသောဒြပ်စင်များသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
လူ၏မသေနိုင်သောအပိုင်းသည်သုံးဆဖြစ်သည် - ပထမ၊ စိတ်သည်လူကိုလူသားတစ် ဦး ဖြစ်စေသည့်ထူးခြားသည့်နိယာမဖြစ်သည်။ စိတ်သည်လူ၌ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုနိယာမဖြစ်သည်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်၊ ခွဲခြားသည်၊ နှိုင်းယှဉ်သည်၊ ၄ င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခြားသူများနှင့်ခွဲခြားသည်ဟုယူမှတ်သည်။ ဒါဟာအလိုဆန္ဒနှင့်အတူစည်းလုံးနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝစဉ်အတွင်းကသူ့ဟာသူဖြစ်အလိုဆန္ဒထင်။ အကြောင်းပြချက်များကိုစိတ်ထား, ဒါပေမယ့်အလိုဆန္ဒလို; အကြောင်းပြချက်ဆိုထားသည်အရာကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်ဗီဇအတိုင်း, တပ်မက်။ စိတ်နှင့်အဆက်အသွယ်မှအလိုဆန္ဒနှင့်ဘဝမှကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများအားလုံး။ စိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒ၏အဆက်အသွယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လူသား၏နှစ်ဆရှိသည်။ တဖကျတှငျတစ်တဏှာ, ပြင်းထန်သော, ပြံ့နှံ့ brute; အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ဘုရားသခင့်မူလအစဖြစ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်။ ငြိမ်းချမ်းသောမေတ္တာရှိခြင်း။ စိတ်ကိုသဘာဝတရား၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲသောအားဖြင့်နိယာမဖြစ်၏ တူးမြောင်းများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ကောင်းကင်မျှော်လင့်ချက်ရှိသောအဆောက်အအုံများပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်သဘာဝအင်အားစုများသည်ယဉ်ကျေးမှုများကိုတည်ဆောက်ရန်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်မောင်းနှင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ ဆ္ဌမဗုဒ္ဓဘာသာသည်ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ထိုနိယာမသည်မိမိကိုယ်ကိုအခြားသူများနှင့်အခြားသူများ၌ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ၎င်းသည်စစ်မှန်သောညီအစ်ကိုအသင်းအပင်း၏နိယာမဖြစ်သည်။ သဘာဝတရားအားလုံးသည်မြင့်မားသောအဆင့်သို့မြှင့်တင်ရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျိုးစွန့်သည်။ ၎င်းသည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်၏လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သတ္တမ Atma သည်သန့်ရှင်းသော၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သူတပါးနှင့်တစည်းတဝေးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ စိတ်၊ စိုးလ်နှင့် ၀ ိညာဉ်တို့သည်မသေနိုင်သောနိယာမများဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ပုံစံ၊
လူ၏ခန္ဓာကိုယ်၊ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ၀ ိညာဉ်အားခရစ်ယာန်တို့၏ကွဲပြားခြင်းသည်လုံးဝမရှင်းလင်းပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါက၊ သီးခြားနေထိုင်ခြင်း၊ အမြဲတမ်းပုံစံနှင့်လူသားအတွင်းရှိတိရစ္ဆာန်တို့၏အခြေအနေမည်သို့ရှိမည်နည်း။ ၀ ိညာဉ်အားဖြင့်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည့်အရာဟုဆိုလိုပါက၎င်းသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့်ကွဲပြားသောရှင်းပြချက်လိုအပ်သည်။ ခရစ်ယန်သည်စိုးလ်နှင့် ၀ ိညာဉ်ကိုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသည်။ သူသည် ၀ ိညာဉ်နှင့် ၀ ိညာဉ်အားအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့တစ်ခုချင်းစီအကြားခြားနားချက်ကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ဘာသာရေးပညာရှင်သည်သူ၏ခုနစ်ဆခွဲခြားမှုအရလူကိုရှင်းပြချက်အနည်းဆုံးပေးပြီးအနည်းဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။
သေခြင်းဆိုသည်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၏ပုံစံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံနှင့်ကွဲပြားခြင်းဖြစ်သည်။ သေခြင်းနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအီ၏ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်အထက်မှခြေထောက်မှကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်စိတ်သို့မဟုတ်အတ္တသည်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သက်ဝင်သက်နှင့်ထွက်လာသည်။ ထွက်ခွာသွားခြင်းအတွက်အသက်ရှုရပ်တန့်, ပုံစံခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာနှင့်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘတ်ကနေတက်များသောအားဖြင့်ပါးစပ်ကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲကလှိမ့်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုဆက်သွယ်ထားသည့်ကြိုးကြိုးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးသေသွားသည်။ ထိုအခါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်ရှင်သန်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အလိုဆန္ဒနိယာမကဘ ၀ တစ်လျှောက်စိတ်ထဲတွင်၎င်း၏ဆန္ဒများကိုသူ့ဟာသူဟုစဉ်းစားမိပါက၊ စိတ်၏စိတ်ကိုအချိန်အတန်ကြာချုပ်နှောင်ထားနိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တိရိစ္ဆာန်အလိုဆန္ဒများနှင့်အတူ၎င်းနှင့်သူတို့အကြားခွဲခြားနိုင်သည့်အချိန်အထိဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်၌နေထိုင်စဉ်ကအားဖြင့် enter ည့်ခံသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးအတွေးများနှင့်ကိုက်ညီသောအနားယူသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု၏စံပြပြည်နယ်သို့ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အနားယူရာကာလပြီးဆုံးသည်အထိဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်ကျန်ရှိနေသေးသည့်နေရာမှ ဆက်လက်၍ ၎င်း၏အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်သွားသည်။
အများစုမှာ spiritualists သူတို့ရဲ့ seances မှာထွက်သွားကြ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစကားပွောကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ Theosophists ဒီဖြစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်းဆိုရမည်မှာ, မြင်ကြဘာသောဝိညာဉျသပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစွန့်ပစ်သောခရုခွံ, spook သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူသည်မှန်ကန်သောပါသလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် theosophist ၏ဖော်ပြချက်သည် ပို၍ မှန်ကန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူမှတ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ seance တစ်ခုနှင့်စကားပြောရသောအရာဝတ္ထုသည်ဘဝစဉ်အတွင်းထင်မြင်ယူဆသောအရာများသာဖြစ်ပြီးပဟေconversationိအနေဖြင့်ရုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လူသည်ဝိညာဉ်ရေးရာများကိုပြောဆိုလိမ့်မည်။
ယောက်ျား၏စိတ်ဝိညာဉ်၌၎င်း၏အလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်ကအသေခံပြီးနောက်အကျဉ်းကျင်းပစေခြင်းငှါ အကယ်. အဘယ်ကြောင့်ဤဝိညာဉျသ seances မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အဲဒါကိုပေါ်လာနှင့်စောင့်နှငျ့စကားပွောပါဘူးဆိုမှားသလဲ
လူ့ဝိညာဉ်သည်သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားစမြည်ပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်“ ထိုင်သူများ” သည်ယာယီအကျဉ်းသားအားမည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်ကိုမသိသောကြောင့်ထိုပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဆင့်ခေါ်ရန်လိုအပ်သည်။ မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသိသူသို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ၏အသက်ရှင်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြသည့်ဆန္ဒကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်နှင့်၎င်း၏ဆန္ဒများကို ခွဲခြား၍ မရသောလူ့စိတ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်း၏အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ရန်လိပ်ပြာနှင့်ဆင်တူသည့်အပြောင်းအလဲကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်သည်ထွက်ခွာသွားသူများ၏ဝိညာဉ်များဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်းသည်မှားသည်။ ဒီအခြေအနေမှာပိုးအိမ်သကဲ့သို့မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ မိမိအလိုအလျောက်တိရိစ္ဆာန်နှင့်ခွဲခြားရန်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်သောလူ့စိတ်ဝိညာဉ်သည်ထိုကဲ့သို့သောညှဉ်းဆဲခြင်းကိုဖြစ်စေသောထိုသတ္တ ၀ ါနှင့်ထပ်တူပြုရန်ငြင်းဆန်လိမ့်မည်။
ထိုသို့သောထူးခြားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအရေးပါမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်အရှိဆုံးအချက်အလက်များကဲ့သို့သောအချို့သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဖြစ်ခြင်းသည်အထီးကျန်ဆန်သောလူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောထွက်ခွာသွားသူတစ် ဦး ၏ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အဖွဲ့များ၏ဆက်သွယ်မှုများသည်အရေးမကြီးသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ စကားများပြောကြသည်။ အစည်းအဝေးတစ်ခုတွင်ထိုင်သူတစ် ဦး မှတင်ပြသောကိစ္စအချို့အပေါ်ရံဖန်ရံခါထင်မြင်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထွက်ခွာသွားသောမိတ်ဆွေများသည်သူတို့၏မြေကြီးအသက်တာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်ဤစကားများပြောဆိုခြင်းကိုအပြစ်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေများအဖြစ်သူတို့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းအားသူရူးများခိုလှုံရာနေရာတွင်ထားခဲ့သင့်သည်။ သူတို့စိတ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့တခါမှာသိသာပါပြီ။ ဒါက seances မှာပေါ်လာသောသတ္တဝါမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ရုံပါပဲ။ သူတို့သည်အမှန်တကယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ကြပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောဆန္ဒမှာမူဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောစိတ်ကိုရှင်းလင်းသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုသာရှိသောဆန္ဒသည်တည်ငြိမ်မှုတွင်ပေါ်နေသည်။ ဤပုံပန်းသဏ္showingာန်သည်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့အခြားအကြောင်းပြချက်များပြသခြင်းမရှိ၊ ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ အရူးလိုပဲသူတို့ဟာရုတ်တရက်ဘာသာရပ်တစ်ခုကိုစိတ် ၀ င်စားပုံရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာရုတ်တရက်ပျောက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာ၊ ဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုခုန် လူတစ်ယောက်သည်ရူးသွပ်နေသည့်နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်သို့သွားသောအခါသူသည်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်အချို့နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ အချို့သည်စိတ် ၀ င်စားစရာအကြောင်းအရာများစွာနှင့်သက်ဆိုင်သောလွယ်ကူမှုနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်။ သို့သော်အချို့သောကိစ္စများကိုမိတ်ဆက်သောအခါရူးသွပ်မှုသည်အကြမ်းဖက်လာသည်။ အကယ်၍ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လုပ်ပါကသူတို့လူသားဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေသောအချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ seances မှာပေါ်လာသူ spook သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒပုံစံများကိုအတူတူပင်။ ၎င်းတို့သည်ပင်ကိုအသိစိတ်များ၊ တောင့်တမှုများနှင့်မြေကြီးအသက်တာအတွက်ပဲ့တင်ထပ်နေပြီးထိုဆန္ဒများနှင့်အညီထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသော်လည်း၊ အခြားကိစ္စရပ်များကိုသူတို့လိုချင်သောဆန္ဒနှင့်မကိုက်ညီသောအခါမိတ်ဆက်ပေးသောအခါသူတို့သည်အမြဲလိုလိုစကားမပြောနိုင်သောစကားများပြောဆိုခြင်းသို့ကျရောက်သွားသည်။ သူတို့ကတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့လိမ္မာပါးနပ်မှုရှိတယ်၊ တိရစ္ဆာန်လိုပဲသူတို့နောက်ကိုလိုက်သူကိုရှောင်ကွင်းဖို့လယ်ကွင်းမှာကစားမယ်၊ သူတို့ခြေရာကိုဖြတ်ပြီးပြန်ဖြတ်မယ်။ အကယ်၍ အမဲလိုက်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါကထွက်ခွာသွားသူသည်သူ၏“ အချိန်ပြီးပြီ၊ သွားရမည်” ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်မေးမြန်းသူအားနှုတ်ဆက်သည်။ သို့မဟုတ်သူကသူတောင်းသည့်မေးခွန်းကိုမည်သို့ပြန်ဖြေရမည်ကိုမသိကြောင်းပြောလိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူသားတစ် ဦး သည်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံ။ ပေါ်လာမည်ဆိုပါကသူသည်သူ၏ဖော်ပြချက်များနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိလိမ့်မည်၊ သူ၏ဆက်သွယ်မှု၏သဘောသဘာ ၀ မှာကျင့် ၀ တ်၊ ကျင့် ၀ တ်နှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးအရတန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။
seances မှာပွဲသေသောနောက်လူ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် discarnated ခဲ့ကြရာသာအခွံ, spooks သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒအလောင်းတွေ, မှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသာသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှလူသိများနေတဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်စောင့်နှငျ့ဆကျသှယျနိုင်ကြသည်ကြောင်း, ဘာကွောငျ့လဲ ဒါဟာတူညီတဲ့ဘာသာရပ်ထပ်ခါထပ်ခါဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုပါသလဲ
မြေကြီးအသက်တာအတွင်း spooks (သို့) အလိုဆန္ဒများကိုသူတို့အမည်များဖြင့်ချိတ်ဆက်မိလျှင်အရူးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူတို့ဟာအချို့သောအကြောင်းအရာများကိုသတိပြုမိကြသော်လည်း၊ သူတို့သည်အလိုအလျောက်များသာဖြစ်ကြပြီး၊ ဘဝအတွေးများနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများ။ ဓာတ်စက်တစ်ခုကဲ့သို့သူတို့သည်သူတို့ပြောသောအရာများကိုထုတ်ပြောကြသည်၊ သို့သော်ဓာတ်စက်နှင့်မတူဘဲသူတို့သည်တိရစ္ဆာန်၏အလိုဆန္ဒများရှိသည်။ သူတို့၏အလိုဆန္ဒများသည်ကမ္ဘာမြေနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသဖြင့်သူတို့သည်ယခုရှိနေကြသော်လည်းစိတ်၏တည်ရှိမှုကြောင့်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းမရှိဘဲဖြစ်နေသည်။ သူတို့၏အဖြေများကိုအကြံပြုထားပြီးမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကညွှန်ပြထားသည်။ ၎င်းကိုသူကသူသတိမပြုမိသော်လည်းမေးခွန်းမေးသူ၏စိတ်ထဲတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကြည့်လျှင် ၀ တ်ဆင်သူ၏ ဦး ထုပ်သို့မဟုတ်သူသတိမပြုမိသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ မေးမြန်းသူအားသူမသိရှိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုခုကိုအကြောင်းကြားသောအခါသူသည်၎င်းကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုယူဆပြီး၎င်းသည်သူနှင့်သူ၏သတင်းပေးမှသာသိနိုင်မည်ဟုထင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မေးခွန်း၏စိတ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုမှာအလိုဆန္ဒပုံစံနှင့်၎င်းကိုအခါအားလျော်စွာခွင့်ပြုသည့်အခါဖော်ပြချက်ပေးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏အထင်အမြင်ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာဝိညာဉ်များတခါတရံအမှန်အတိုင်းလည်းနောက်တော်သို့လိုက်လျှင်အားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်၏အကျိုးကျေးဇူးမှဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောအကြံပေးကြဘူးကြောင်းငြင်းဆိုမရနိုင်ပါ။ ဘယ်လို theosophist, ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကိုအခြားဆန့်ကျင်, ဤအချက်များကိုငြင်းပယ်သို့မဟုတ်ကွာရှင်းပြနိုင်မလဲ?
အမှန်တရားကိုလေးစားသောအယူဝါဒဝါဒီသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မျှမည်သည့်အခါကမျှအချက်အလက်များကိုငြင်းပယ်ရန်၊ အမှန်တရားကိုရှောင်ရန်မကြိုးစားပါ။ သူသည်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်၊ မည်သည့်အမှန်တရားကိုမဆိုလူတစ် ဦး ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်အချက်အလက်များကိုဖုံးကွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲအချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အဖြစ်မှန်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းကသူသည်မကျေနပ်သောပျောက်သွားသောမိတ်ဆွေတစ် ဦး အနေနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့ ်၍ ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်မညီသောလူမဆန်တဲ့သူ (သို့) spook (သို့) shell (သို့) elemental များ၏ပြောဆိုချက်များကိုမှန်ကန်စွာလက်ခံရန်မလိုအပ်ပါ။ သူကပြောဆိုချက်များကိုနားထောင်သည်ထို့နောက်သက်သေအထောက်အထားများအားဖြင့်မှန်သို့မဟုတ်မှားယွင်းသောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြ။ အဖြစ်မှန်အမြဲသူတို့ကိုယ်သူတို့သက်သေပြ။ သူတို့၏ခံတွင်းထဲကသူတော်စင်များသည်မိမိကိုယ်ကိုသူတော်စင်များ၊ ဒphilနပညာရှင်များ၊ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့သောလူများ၏ဟောပြောချက်ကသူတို့ကိုမဆင်ခြင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်ရေးဝါဒီများ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအချက်အလက်များနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မယုံကြည်ပါ။
မေးခွန်း၏ပထမအပိုင်းမှာ -“ ၀ ိညာဉ်များ” သည်တစ်ခါတစ်ရံအမှန်တရားကိုပြောသလော။ သူတို့ - တစ်ခါတစ်ရံ; ဒါပေမယ့်ဒီကိစ္စကိုများအတွက်အများဆုံးခိုင်မာရာဇဝတ်ကောင်ပါဘူး။ “ ၀ ိညာဉ်” ဟုဖော်ပြထားသောအမှန်တရားကိုအထူးဖော်ပြခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောသူများက“ ၀ ိညာဉ်များ” ဟုခေါ်ဆိုရန်တိုက်တွန်းသည့်အရာကဖော်ပြသောအမှန်တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတို့သည်သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စွပ်စွဲပြောဆိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ပတ်အတွင်းသင်သည်မာရိသို့မဟုတ်ယောဟန်ထံမှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်မာရီယာဖျားနာလာမည်၊ ကျန်းမာလာမည်၊ သို့မဟုတ်ကောင်းသောကံကြမ္မာအချို့ကျရောက်မည်၊ သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သေဆုံးသွားလိမ့်မည်ဟုကြေငြာချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။ မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဟု။ ဤအရာတစ်ခုခုမှမှန်လျှင်၎င်းသည်မြင့်မားသော (သို့) အနိမ့်နိမိတ်လက္ခဏာရှိသည့်အရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုသည်လူ့ဇာတိပါ ၀ င်လျှင်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အာရုံခံစားနိုင်စွမ်းကိုပြသနိုင်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုစီက ၄ င်းရဲ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ခန္ဓာတွင်နေထိုင်နေစဉ်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံများမှတစ်ဆင့်သိမြင်သည်။ နှင့်ဖြစ်ရပ်များထိုကဲ့သို့သောအအေးမိ, ကျဆင်းလာ, ဒါမှမဟုတ်စာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိ, ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုနှင့်အတူတွေ့ဆုံအဖြစ်ထိုကဲ့သို့သော, သူတို့ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်၌သာရိပ်မိနေကြသည်။ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ကိုသာကန့်သတ်မထားပါကအာရုံခံဆဲရှိပါက၎င်းအာရုံများသည်ရူပဗေဒ၏နောက်ဘက်လေယာဉ်ပေါ်၌သက်ရောက်သည်။ အာကာသလေယာဉ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သူသည်ထိုတွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်များကိုရိပ်မိနိုင်သည်။ အဆိုပါ astral လေယာဉ်အတွက်ရှုထောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်ပိုမိုမြင့်မားမြေပြင်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်စာတစ်စောင်ရေးသားရန်သူ၏အတွေးသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်အတွေးကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိသူတစ် ဦး မှမြင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အအေးမိခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သူ၏နက္ခတ်ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေကိုတွေ့မြင်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်။ ရပြီ အချို့သောမတော်တဆမှုများကို၎င်းတို့အကြောင်းရင်းများစတင်လှုပ်ရှားသောအခါတွင်လည်းခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းတရားများသည်လူတို့၏အကြံအစည်များ (သို့) လုပ်ဆောင်မှုများတွင်လျော့ပါးသွားစေပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပေးသည့်အခါရလဒ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာပြရလျှင် - အကယ်၍ ကျောက်တုံးကိုလေထဲပစ်ချလိုက်လျှင်မြေကြီးကိုမထိမီကြာမြင့်စွာကပြိုလဲသွားနိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ၎င်းကိုဖြိုချလိုက်သည့်အင်အားနှင့်၎င်း၏မြင့်တက်မှု၏ arc အရ၎င်း၏အဆင်း၏ကွေးမှုနှင့်သူကျသွားမည့်အကွာအဝေးအရအတိအကျခန့်မှန်းနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်နက္ခတ်တာရာယ်တွင်အလုပ်လုပ်သောအဖွဲ့အစည်းများသည်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အကြောင်းရင်းများကိုမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုနက္ခတ္တဗေဒတွင်မြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုတိကျမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ သို့သော်လူသတ်သမားတစ် ဦး သည်ကျောက်တုံးပေါ်တက်ခြင်းကိုမြင်နိုင်ပြီးသူတော်စင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကဲ့သို့၎င်း၏ဆင်းသက်လာမှုကိုအမှန်ပင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဖြစ်ကြ၏။ မတော်တဆမှုတစ်ခုမှမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြံပေးချက်သည်၎င်းကိုမသေနိုင်သောဝိညာဉ်ကပေးသည်ကိုမပြပါ။ လူကြမ်းတစ် ဦး သည်လာမည့်မတော်တဆမှုတစ်ခုအားပညာရှိကဲ့သို့အတိအကျအကြံပေးလိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုကျောက်တုံးကျောက်တုံးပေါ်မှာရပ်နေတဲ့သူကိုအကြံပေးပြီးသူ့ဒဏ်ရာကိုတားဆီးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ရူးရူး အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသောအကြံအစည်သည်စိတ်မပါပါကမည်သို့သောအကြံဥာဏ်မျိုးပေးနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့က spook တစ် ဦး မျှော်လင့်ချက်မဲ့ရူးသွပ်စိတ်ကိုကင်းမဲ့နှင့်အတူတူပင်အဓိပ္ပာယ်အတွက်စိတ်ကိုကင်းမဲ့ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ သူသည်မိမိမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအသိပညာပျောက်သွားသော်လည်းထိုဆန္ဒ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည့်အနည်းငယ်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်စိတ်အကြံအစည်ကိုပေးသောဤရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဥခွံသည်တိရိစ္ဆာန်ကျန်ရှိနေသေးသောစိတ်ကိုပျောက်သွားသော်လည်းသတိရရမည်။ တိရိစ္ဆာန်သည်၎င်း၏ကောက်ကျစ်မှုများကိုမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ၊ စိတ်၏ကျန်ရှိနေသောထင်မြင်ချက်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်၏ပရိယာယ်သည်ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်၎င်းသည်လည်ပတ်နေသည့်နယ်ပယ်အတွင်း၌အဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပျက်သွားသည်။ ရုပ်ပုံကိုမှန်ကထင်ဟပ်သကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်မှန်များသည်သူ့ဟာသူပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုသည်ဆန္ဒကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးဤရုပ်ပုံသည် seance ရှိထိုင်သူတစ် ဦး နှင့်ဆက်စပ်မှုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုရှိပါက spook သို့မဟုတ် shell သည်၎င်းပေါ်ရှိရောင်ပြန်ဟပ်သောအတွေးပုံကိုတုံ့ပြန်ပြီးစန္ဒယားအနေဖြင့်အတွေးသို့မဟုတ်အထင်အမြင်ကိုထုတ်ဖော်ရန်ကြိုးစားသည်။ အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သော့ကိုကိုင်တွယ်သူကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ seance တစ်ခုမှလူတစ်ယောက်သည်တစ်ခုခုပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာလွဲမှားစွာပြုလုပ်မိပါက၎င်းဆုံးရှုံးမှုသည်သူ၏စိတ်ထဲတွင်ရုပ်ပုံတစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရှိနေပြီး၎င်းပုံသည်မှတ်ဉာဏ်ဟောင်းတစ်ခုအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ရုပ်ပုံကိုအလိုဆန္ဒကိုယ်ခန္ဓာ (သို့) spook မှရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ထို့နောက်ရုပ်ပုံကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်ထိုအချိန်တွင်တန်ဖိုးရှိသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပျောက်ဆုံးသွားသည်သို့မဟုတ်သူဆောင်းထားသည့်နေရာ၌၎င်းပျောက်ဆုံးသွားသည့်နေရာတွင်၎င်းဆောင်းပါးကိုသူတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုပြောခြင်းအားဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်မှန်များကိုဖော်ပြထားသောဖြစ်ရပ်များနှင့်မှန်ကန်သောဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည့်အကြံပေးချက်ကိုပေး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အချက်တစ်ချက်ကိုဖော်ပြသည့်အခါမှားယွင်းသောရာဂဏန်းများကိုဖော်ပြပြီးအကြံဥာဏ်တစ်ချိန်ကမှန်ကန်သောနေရာတွင်၎င်းသည်အကြိမ်ပေါင်းတစ်ထောင်လှည့်စားခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထွက်ခွာသွားသူများ၏အကြံဥာဏ်များကိုတောင်းခံပြီးလိုက်နာရန်မှာအချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်အမှားအယွင်းများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောကြသည်။ လူသိများသည်မှာအခြားသူများ၏အားနည်းချက်များကိုလောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ စျေးကွက်တွင်ထင်မြင်ယူဆခြင်းစသည်တို့သည်သူတို့၏ရည်ရွယ်ထားသောသားကောင်များကိုငွေပမာဏအနည်းငယ်ဖြင့်အနိုင်ရစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထင်မြင်ချက်။ ၎င်းသည်သားကောင်အားသူ၏အန္တရာယ်ကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ရန်အားပေးသည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သူသည်လုံးဝပျက်ပြားသွားသည်။ နတ်ဝင်သည်များနှင့် spook chasers များနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုလိုက်ရှာသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့အမှန်တကယ်တွေ့လိုက်ရသည့်အချက်အလက်များသည်ထင်ကြေးပေးသူများကဲ့သို့သူတို့ထွက်ရန်အလွန်နက်ရှိုင်းသည်အထိသူတို့၏အလေ့အကျင့်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုသွေးဆောင်သည်။ အဆိုပါ spooks ထိန်းချုပ်မှုယူဆနောက်ဆုံးတွင်သားကောင်ကိုလုံးဝ obsessive ပြီးတော့ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးအောက်ပါအတိုင်းလိမ့်မည်။ mediumship နှင့်ဖြစ်ရပ် chasers ၏စာရင်းဇယားသည်ဤထုတ်ပြန်ချက်များမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။